अष्ट्रेलियाको भावुक दृष्यः ज’लेकी घाइ’ते आमाको उपचार गर्दा जव बच्चाले छाड्नै मानेन… - Nepal Insider
अष्ट्रेलियाको भावुक दृष्यः ज’लेकी घाइ’ते आमाको उपचार गर्दा जव बच्चाले छाड्नै मानेन…
January 8, 2020 539
अष्ट्रेलियामा फै’लिएको आगोका का’रण करिब ५० करोड जनावरले ज्या’न गु’माए भने लाखौँ घा’इते छन्। आगोमा परेका लाखौँ जी’वजन्तुलाई उ’द्धार गरिएको छ भने घा’इते जनावरको उपचार पनि गरिएको छ।
यसै क्रममा एक घा’इते कोआला (अष्ट्रेलियामा पाइने जनावर) र उसको बच्चाको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। उक्त तस्वीरमा कोआलाको बच्चाले आफ्नी आमाको उपचारको पूरै समय आमासँगै टाँ’सिएको छ। यही हो आमासँग बच्चाको प्रेम भन्दै कयौँ अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले समाचार बनाएका छन्।
आमाको उपचारका क्रममा उसलाई एकछिन पनि छो’डेन्। डाक्टरले बच्चालाई आमासँग अलग बनाउने धेरै प्रयास गरे। तर बच्चाले आमालाई छो’ड्न मानेन्।
अस्ष्ट्रेलियाको जी’व सं’रक्षणले आमाको नाम लिजी र बच्चाको नाम फे’न्टम राखेको छ। सबैभन्दा बढी प्रेम आमा बच्चाको पृथ्वीमा सबैभन्दा बढी बच्चाको आमासँग र आमाको बच्चासँग माया हुने गर्दछ। जहाँ जनावरको अस्पतालमा कोआलाको बच्चाले आमाको उपचारका क्रममा उसलाई एकछिन पनि छो’डेन्। डाक्टरले बच्चालाई आमासँग अलग बनाउने धेरै प्रयास गरे। तर बच्चाले आमालाई छो’ड्न मानेन्।
दुई हप्ता पहिले अष्ट्रेलियामा फै’लिएको आ’गोबाट बच्न कोआला भाग्दै गर्दा सडकमा कारसँग ठो’क्किएको थियो। उ आगोले थोरै जलेको तर उसले आफ्नो बच्चालाई केही हुन दिएन्। कारसँग ठो’क्किएपछि दुबैलाई अष्ट्रेलियाको जू वाइल्डलाइफ अस्पतालमा उपचारका लागि पुर्याइयो। चिकित्सका अनुसार कोआलाको फोक्सोमा सं’क्रमण र अनुहारमा चो’ट लागेको थियो। त्यसैले उसको श’ल्यक्रिया गर्नु पर्ने भयो
Prevइरानले गर्यो अमेरिकी सेनाको हवाई अड्डामा मिसाइल आ क्रमण , मध्यपूर्वमा अब के होला ?
Nextट्रकको ठक्करबाट १० बर्षिय बालकको मृत्यु
कोरोनाभाइरस संक्रमण ४० दिनपछि पनि देखियो ! नेपाल सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने डा. कर्टको सुझाव
रबि दाजु लाई ‘द लिडर’ मा पर्तिस्पर्धी बनेर भाग लिन जापानबाट १ युबाले दिए यस्तो सुझाब..एक पल्ट अवस्य पढ्नुहोस् ।
बालबालिकालाई मोबाइल दिनु लागु औषध दिए सरह हो